INJIRTA CAD EE GURIGA KU JIRTA: SHARAXAADDA CAYAYAANKA, SAWIRKIISA, SABABAHA LOO ARKO IN MUSQUSHA IYO MEELO KALE, IYO SIDOO KALE SIYAABO LOOGA TAKHALUSO CAYAYAAN - SOOSAARKA DALAGGA
Cayayaanka ku jira guriga - injirta cad cad. Maxaa keena muuqaalka iyo sida looga takhaluso cayayaanku?
Cayayaanka ayaa xitaa u muuqan kara guri ama nadiif ah oo nadiif ah, oo waxyeeleynaya joogitaankeeda degaanka iyo alaabada guriga. Injirta qoryaha cad ayaa sidoo kale iska leh martida aan la aqbalin, oo doorbida qolalka diirran iyo qoyan sida deegaan cusub. Wadaagidda noocan oo kale ah waxay dadka u dhigtaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah u eega habka loola dhaqmo lamaanahaas Maqaalka waxaad ka baran doontaa sida looga takhaluso cayayaanka ee musqusha, jikada iyo meelaha kale.
Injirta cad waxay khalad u tahay cayayaanka, laakiin xaqiiqda waxay ka tirsan yihiin qolofka. Waxaa lagu gartaa kalkaaliyaha xayawaan ee loo yaqaan 'Terrarium' waxaana loo isticmaali karaa cunto ah xayawaanka raaxada ah. Aragtida waxay ka timaaddaa bartamaha iyo koonfurta america, laakiin wuxuu helay adduunka oo dhan.
Qodob kasta oo dhirta burburay waxay ku habboon yihiin quudinta qolofka. Nooca cad ee qoryaha cad waa mid si qumman u shaqeynaya waqtigaana waa kan ugu firfircoon.
Caawin: bay'ada dabiiciga ah, noocyada noocan ah waxaa laga helaa dhagxaan, dayrarka, iyo gaar ahaan badi jirridda qashinka ah.
Waxay leedahay xajmiga jirka oo aan ka badnayn 6 mm oval oo leh xawaare yar oo sare, 6 lamaanaha lugaha caloosha iyo midabka cad, sawir ama midab leh. Qoryaha lama siman yahay, wuxuu leeyahay dusha sare. Indhaha iyo dhowr ka mid ah antennae waxay ku yaalaan dhinaca dhinacyada madaxa.
Hoos waxaa ku qoran sawir cayayaan ah:
Sababaha muuqaalka qolka
Sababta ugu weyn ee muuqaalka ah ee qolofta cad ee guryaha waa abuurista xaalado wanaagsan oo loogu talagalay:
Dharka qoyan ee musqusha wakhti dheer lama saaro.
Dhirta badan oo u baahan waraabin badan.
Qashinka waxaa si dhif ah loo soo saaraa, iyo burburka cuntada ee miisaska, dhulka, laga bilaabo tuwadda si dhakhso ah looga saarin.
Nadiifinta wakhtiga nadiifinta, gaar ahaan mugdi, qoyan, meelo adag oo la gaari karo.
Root dhirta guriga.
Fududaynta hawada ama hawo-gelinta musqusha, huurka badan ee aqalka.
Waa maxay khatarta?
Nooca cad ee alwaaxa ma keeno qof waxyeello weyn leh: ma qaniinaan mana u dulqaadanayo bakteeriyada waxyeesha (saynisyahannadu ma xaqiijin xaqiiqadan). Waxyeellada shuftooyinkani waxay ku jiraan:
dareenka nacaybka iyo nacaybka deganayaasha;
dhimashada geedaha gudaha (cayayaanku wuxuu cunaa nidaamka xididka iyo qaybta sare ee xaarka);
burburinta khudradda iyo miraha miiska iyo xabadaha.
Tilaabooyinka talaabo talaabo ah sida looga baxo guriga
Waa lagama maarmaan in la bilaabo dagaalka ka dhanka ah cayayaanku adigoo raadinaya meelo ay qolofta (habitat) ku uruursato. Waa lagama maarmaan in la raadiyo meelahan sida ciriiri ah sida:
musqusha (mugdi, meel adag oo la gaari karo, meel bannaan oo la dhigto musqusha);
jiko (meelo u dhow iyo hoostaba);
maqnaanshaha, qolka kaydinta, dhulka hoostiisa.
Dayactir dhamaan qalabka guryaha, tuubooyinka awood u leh inay daadiyaan.
Ku rid dhammaan dildilaaca iyo meelaha dillaacsan ee dhismooyinka hoyga, qalabka lagu qalajiyo mesh quruxsan, hubi in yaraanta qoyaanka hawo-siinta joogtada ah (jawiga qallalan ee dibedda ah) ama isticmaalka qalabka gaarka ah ee nuugaya qoyaanka.
Haddii cayayaanku saameeyeen ciidda dhirta gudaha, waxaad u baahan tahay inaad ku beddesho mid cusub.
Si aad u qaadato nadiifinta guud ee lagu isticmaalo kiimikada guryaha.
Sii wad daaweynta degdega ah ee raasumaalka cad oo isticmaalaya hababka caanka ah ama hababka kiimikada iyo adeegyada gaarka ah.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo lagula dagaalamayo daaweynta dadweynaha oo leh digaag cad.
Waa muhiim: Qeybaha dagaalku waxaa loo adeegsadaa si loola dagaallamo cayayaanka, sidaa daraadeed, isla markaaba ka dib marka la shaqeynayo, waa lagama maarmaan in laga tago dhismaha. Carruurta, xasaasiyadaha iyo xayawaanka ayaa si adag u mamnuucaya in ay guriga joogaan xilliga daaweynta.
Ku dar 1 qaado oo ah basbaaska, tubaakada iyo milixda ilaa 1 litir oo biyo ah, si fiican u walaaq oo u oggolow in ay istaagaan dhawr saacadood. Dareerada soo baxday ayaa lagu shubay falejada iyo geeddi-socodka raasamaalka.
Haddii hareeraha guryuhu ay hoos u dhacaan sababtoo ah qoyaanka kor u kacay, waa inaad ku shubtaa cantoobada milixda ee kasta. Saliidku waxay nuugaan si fiican qoyaanka, taas oo u oggolaan doonta in ay qalalaan oo ay ka dhigaan meelo qarsoodi ah oo aan xannibnayn injirta qoryaha.
Quicklime waxay ku caawin doontaa inay ugu dambeyntii ka takhalusto injirta qoryaha. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan tahay inaad ku darto lime qaybta baaldi ama basin (iyadoo la filayo in baaldigu uu yahay 5-litr) oo si tartiib ah biyo ugu shub ilaa biyo ilaa 2/3 ee weelka. Xalkan waxaa ku haray qolka xiran / qolka kale 2-3 maalmood.
Waqtiga lagu shaqeynayo si aad u isticmaasho qolkan waa mid aad u mamnuuc ah, waxaana wanaagsan inaad ka baxdid guriga ama guriga mudo ah.
Markaad la shaqeyneysid lime, waa inaad xirataa gacmo dheer, gacmo gashi, neefsasho, maaskaro, surwaal dheer, maro ama koofiyad.
Qaabka kale waa boric acid. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad kala gooyo 10 garaam oo boric acid ah 0.5 litir oo biyo ah iyo geeddi-socodka xal dhamaystiran, meesha cayayaanku ku urursan yahay.
Waxaanu soo bandhigi doonaa daawashada faaiido wax ku ool ah oo ku saabsan sida looga takhalusi karo injirta qoryaha ee aqalka ku yaalla oo ay ku dhaqmaan dawooyinka dadweynaha:
Baaskiilada kiimikada, adeegga diidmada xirfadeed ee Moscow iyo St. Petersburg
Waxaad ka iibsan kartaa dukaanka ganacsiga ee ku habboon ee dukaanka diyaarinta ee qoryaha. Waxaa jira noocyo badan oo hubka kiimikada ka soo horjeeda cayayaanka suuqa.:
budada iyo malleylka;
tuunbooyin adag iyo jejebyo;
Ururo badan ayaa bixiya adeegyadooda si loogu daaweeyo guryaha guryaha injirta cad cad. Disinsectors waxay isticmaalaan qalabka khaaska ah marka ay qabtaan shaqada.
Qiimaha ururada magaalooyinka waaweyn sida Moskov iyo St. Petersburg waxay noqon doonaan sida soo socota:
Moscow iyo Moscow St. Petersburg
Ururka Qiimaha Ururka Qiimaha
Adeegga Cudurka Moscow Apartment: laga bilaabo 1,800 ilaa 2,600 raaxiis Guriga, aqallada: laga bilaabo 3,500 illaa 10,000 raqiis Adeegga deegaanka deegaanka Apartment: laga bilaabo 1300 ilaa 6500 Rug
Adeegga Nadaafadda ee Mideysan Apartment: laga bilaabo 1800 ilaa 6400 Rug Guri, cottage: laga bilaabo 3500 ilaa 14000 roon Adeegyada Fayadhowrka Apartment: laga bilaabo 1000 ilaa 3900 raaxe Guriga, aqallada: laga bilaabo 4500 ilaa 30000 rubles
Joogitaanka Apartment: laga bilaabo 1,700 illaa 3,000 rukhsadda Guriga, aqallada: laga bilaabo 2,600 illaa 20,000 raqiis Adeegyada Fayadhowrka ee Magaalada Apartment: laga bilaabo 1500 ilaa 3000 raaxo Guri, cottage: laga bilaabo 2500 ilaa 37500 Rug
Daacadnimo Apartment: laga bilaabo 2000 ilaa 15000 raaxo Guri, cottage: laga bilaabo 3500 ilaa 35000 roon Rugta 'Descentr' Apartment: laga bilaabo 1,700 illaa 3,000 rukhsadda Guriga, aqallada: laga bilaabo 2,600 illaa 20,000 raqiis
Daraaseynta 24 Apartment: laga bilaabo 1600 ilaa 8500 Rug Guri, Cottage: laga bilaabo 2550 ilaa 30000 rubles Dezbalt Apartment: laga bilaabo 1300 ilaa 6500 raaxada Guriga, cottage: laga bilaabo 8000 ilaa 32000 roon
Ka hortagga soo noqoshada
Ka hortagga wuxuu inta badan ka hortagaa abuurista xaalado nololeed oo ku saabsan injirta qoryaha cad. Tallaabooyin ka hortag ah:
Guriga waa in si joogto ah loo nadiifiyaa alaabta nadiifinta gaarka ah.
Kensen waa in la qalajiyaa oo kaliya meel leh dhalaalaya, oo leh meel dabacsan (tusaale, balakoonka).
Ka dib markaad wax cunayso, cunto karisid ama maydheyso saxamada, nadiifinta hadhaaga hadha si joogto ah.
Ka fogow qoyaanka joogtada ah ee dhirta dhirta, ha ka badin.
Dhammaan dildilaaca iyo dildilaaca oo ka soocaya guriga ilaa banaanka, illaa albaabka, waa in si taxadar leh loo xiro hawo.
In kasta oo xaqiiqda ah in nambarka cad ee alwaaxa uusan waxyeello u geysanin milkiilayaasha guriga, haddana wuxuu keenaa cadaawad iyo inuu calaamad u yahay daryeel aan ku filnayn guriga oo uu nadiifiyo. Xalka ugu fiican ee la dagaallanka martida aan marti ahayn waxay noqon doontaa inuu ka hortago muuqaalkiisa guriga marka laga bilaabo bilawga, isagoo ogaanaya xaaladaha uu jecel yahay inuu ku noolaado.